Airbus ACJ320neo Aerospace Private Jet Aircraft Review dia manandratra avo fampiononana ny vaovao sy manidina mpandeha amin'ny faravodilanitra vaovao, amin'ny alalan'ny fanararaotana ny teknolojia maoderina indrindra, ireo orinasa malalaka fiaramanidina manolotra mpanjifa ny fahafahana handray ny tarehy fomba fiainana miaraka aminy na aiza na aiza raha mbola mandeha any amin'ny mitaingina fiaramanidina manokana no noheverin'ny sasany ho ny farany amin'ny dia lafo vidy. Na izany aza, misy tena zava-dehibe eo amin'ny mitaingina iray, tokony tena manam-bola izany. Raha misy isan-karazany ampiasaina amin'ny fiaramanidina fiaramanidina manokana fleets, Airbus dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra fiaramanidina marika eo amin'ny raharaham-barotra.
Airbus, ny orinasa izay nanao ny anarany ho an'ny fanavaozana in aerospace teknolojia, dia mamoaka ny taranaka farany ny fiaramanidina manokana natao ho an'ny orinasa sy ny fampiasana fiaramanidina manokana. Tafiditra tao ity taranaka vaovao ny fiaramanidina dia ny Airbus ACJ320neo. Izany famerenana dia haka ny fandinihana akaiky kokoa modely vaovao io sy ny fomba maneho ny hoavin'ny fiaramanidina manokana.
Airbus dia miasa eo amin'ny taranaka manaraka ny fiaramanidina hatramin'ny 2016. Tafiditra ao ireo fanavaozam-baovao no tena malaza ny Airbus Commercial Jet (ACJ) tsipika. Ny tsipika ACJ dia tena malaza amin'ireo izay hividy ny fiaramanidina sy ny fleets izay mitondra fanofana fiaramanidina manokana tolotra. Raha ny ACJ dia voaporofo fa tena mahomby sy ny fitambaran'ny ny endri-javatra, fampisehoana, sy ny fahombiazan'ny, Airbus mbola mahafantatra fa mbola misy toerana ho an'ny fanatsarana. Izany no nahatonga ny famoahana ny ACJneo, ny taranaka manaraka fiaramanidina Airbus ara-barotra, tamin'ny Janoary 2016.
Ny Airbus ACJ320neo dia ny vokatry ny Airbus ny Neo fandaharana. Neo, raha ny marina ny fanafohezan-teny izay mijoro ho "safidy maotera vaovao". Airbus lasa safidy maotera vaovao noho ny fiaramanidina ara-barotra toy ny A320. Ireo fitaovana vaovao manana tanjona ambony fampisehoana: ny 15 ny 20 isan-jato fanatsarana in solika fahombiazana, nihena tabataba, dia ambany entona. Raha ireo fampanantenana, baiko ny "Neo fiaramanidina" ireo vondrona lehibe-5200, mba ho marina. Hametraka izany ho fomba fijery, Airbus dia lafo manodidina 7500 tery-body fiaramanidina hatramin'ny 1988. Noho ny halehiben'ny varotra, ny Neo maneho ny ho avy ny Airbus. Misy ny hiaina mifanaraka amin'ny saritaka momba toy izany ankehitriny Mpanao voalohany vola ho an'ny orinasa.
Ao amin'ny fampandrosoana ny ACJneo, Airbus Nitady fomba hahatonga ny fiaramanidina mahomby kokoa noho ny hatramin'izay. Ny ambaratonga voalohany ny orinasa mimetatra nampiasaina dia ny "seza kilaometatra isaky ny mpandeha" vidiny. Izany dia heverina ho toy ny ohatry ny vidim-fahombiazan'ny niasa ny fiaramanidina. Ambany izany vola izany, ny fomba mahomby ny fiaramanidina dia. Mba hahazoana ny ambany indrindra isan-mpandeha seza maily vidin'ny, Airbus nanao fanatsarana isan-karazany ao an-injeniera ny ACJneo. Raha Airbus efa nanisy tsy manindry ny fahaiza, dia nanao izany tsy namono zavatra hatao fanatitra fampiononana, fampisehoana, faniry sy ny endri-javatra ho an'ny fiaramanidina. Ireo faritra ny fanatsarana no hatao ao anaty mifantoka taty aoriana.
Noho ny toerana manan-danja ao amin'ny Airbus vokatra tsipika, ny ACJ320neo tsy maintsy hiaina mifanaraka amin'ny saritaka momba sy ny maro hafa. Ny zavatra tsara dia fa raha maka ny fandinihana akaiky kokoa, fiaramanidina io dia ny zava-drehetra dia nisy dokam-barotra ... ary avy eo dia bebe kokoa.
Ny fahafahana ankapobeny fiaramanidina iray dia azo zaraina ho maro mari-pandrefesana. Io fandrefesana no ankapobeny miankina amin'ny fanahafana ny anatiny ny olona iray fiaramanidina. Fahaiza entana azo zaraina ho 2 masontsivana: anatiny entana fahaiza-, dia ny habetsaky ny entana izay azo stowed tao anatin'ny fanerena / hafanan'ny maso Indrindra amin'ny fiaramanidina, ary ny ivelany entana fahafahan'ny, dia ny habetsaky ny entana izay azo jerena avy any ivelany ny fiaramanidina.
Na dia ny Airbus ACJ320neo tsy manana fahaiza entana ivelany, dia mahafaka ny azy sy ny fahaiza-manao goavana anatiny entana. Ny fahaiza entana anatiny ny ACJ320neo dia refesina amin'ny Mahagaga 976 toratelo litatra, manao izany mora foana ny tsara indrindra amin'ny kilasy amin'ny sokajy ity. Ny seza ankapobeny fahafahana izany tanteraka fiaramanidina dia miankina amin'ny ny karazana anatiny te configurations ny tompony, fa ny fanahafana tahiry afaka manome seza mampahazo aina ho an'ny 19 olona, izay mihoatra lavitra noho izay hahavita ny ankamaroan'ny tanjona.
To refesina ny fiaramanidina ny payload, tsy maintsy mampiasa fepetra maro mifandray amin'ny fiaramanidina ny lanjan'ny, ny isan'ny zavatra mety mitondra, sy ny toy izany. Ny miasa lanjan'ny fiaramanidina dia ny lanjan'ny fiaramanidina anisan'izany ny tantsambo miasa, ilaina tsiranoka toy ny solika, ary ny fitaovana rehetra ilaina ho an'ny mpandraharaha sidina. Ny ambony indrindra sy ny fipetrahana fiaramanidina lanja dia faritana ho ny ambony indrindra tanteraka lanjan'ny fiaramanidina iray izay feno tanteraka ny fiaramanidina sy ny fipetrahana azo tanterahana soa aman-tsara. Mahasoa lanja dia faritana ho toy ny habetsaky ny lanjan'ny fa ny fiaramanidina afaka mitondra araka ny lanjan'ny mpanamory, tantsambo, sy ny solika esorina.
Eo amin'ny endri-javatra ireo payload, ny enhancements ny Airbus ACJ320neo miasa tsara ihany koa ny amin'ny famindram-po. Fipetrahana lanja ambony indrindra dia refesina amin'ny 148,592 kilao, ary fiaramanidina lanja ambony indrindra dia refesina amin'ny 174,165 kilao, izay ambony kokoa noho ny ankamaroan 'ny fiaramanidina ao amin'ny kilasy. Ny miasa lanjan'ny fiaramanidina io no refesina amin'ny 104,453 kilao. Farany, ny ilaina payload ity fiaramanidina dia refesina amin'ny 8,900 kilao, izay mety mba mitsoka be, fa be avo noho ny fifaninanana. Eo amin'ny lafiny payload isa, ny ACJ320neo mamirapiratra.
Speed ​​dia miankina amin'ny isan-karazany ny hiovaova. Io no zava-dehibe miankina amin'ny endri-javatra anatiny toy ny maotera hery sy aerodynamic fahombiazan'ny, raha any ivelany anton-javatra toy ny rivotra sy ny hatevin'ny headwind / tailwind hery ihany koa ny anjara. Fa ny Airbus ACJ320neo, ny tarehimarika manondro ny fiaramanidina izay mihoatra noho ny mahavita haingana sidina. Ny hafainganam-pandeha ambony indrindra Cruise dia refesina amin'ny 527 mph, eo ho eo ny hafainganam-pandeha Cruise dia refesina amin'ny 527 mph, isan-karazany sy ny lava Cruise hafainganam-pandeha dia refesina amin'ny 514 mph. Ireo rehetra ireo dia maneho tarehimarika fanatsarana manetry tena toy izany koa raha oharina amin'ny fiaramanidina ao amin'ny kilasy.
Ny isan-karazany ny fiaramanidina dia ny fandrefesana ny fomba lavitra ny fiaramanidina afaka mamakivaky mampiasa feno ny solika tanky. Raha jerena fa ny antony iray izay nifantoka tamin'ny Airbus mandritra ny fampandrosoana ny Neo solika fandaharana dia fahombiazana, dia afaka manantena izany fiaramanidina hamirapiratra ao amin'io sampan-draharaha, na, fara fahakeliny, mampiseho lehibe momba ny fanatsarana ny fifaninanana. Toa nandritra ny fitiliana, ireny fiovana ireny niara-niasa, vokatry ho olo-malaza isan-karazany izay hitsoka lasa mora foana ny fifaninanana.
Ny ambony indrindra norefesiny isan-karazany ny Airbus ACJ320neo dia refesina amin'ny 7,099 kilaometatra, raha mbola feno ny seza isan-karazany dia refesina amin'ny 7,021 kilaometatra. Maximum isan-karazany dia faritana ho toy ny furthest ny fiaramanidina afaka manidina amin'ny hafainganam-pandehan'ny Cruise amin'ny tandrify Altitude, raha feno seza isan-karazany dia faritana ho toy ny isan-karazany ambony indrindra ny fiaramanidina afaka manidina amin'ny payload indrindra. Ny tsirairay dia be fandrefesana ampy kokoa toy izany koa raha oharina amin'ny fiaramanidina, hamonjy ny fampanantenana fa Neo fiaramanidina dia manasongadina, fara fahakeliny, 20% fuel tsara kokoa raha oharina fahombiazana ny fifaninanana.
Altitude fampisehoana iray hafa mimetatra fampiasa mba hamantarana ny fiaramanidina ny fampisehoana fahaiza-manao. Ny ambony ny haavo ny fiaramanidina afaka mamakivaky, ny tsara kokoa ny heriny. Mandritra izany fotoana izany, afaka nandeha amin'ny haavo ambony kokoa mampiseho ny sasany fampisehoana sy ny fahombiazan'ny tombontsoa. Amin'ny rivotra thinner nanatrika avo, rivotra fanoherana sy tarihiny lasa mihena, vokatry ny hafainganam-pandeha ambony sy tsara kokoa Travel solika fahombiazan'ny. Mahagaga, ny ACJ320neo fanompoana manana valin-drihana ny 41,000 tongotra, izay noforoninao hisy endrika ambany raha oharina amin'ny fiaramanidina toy izany koa izay manana haavo eo fanompoana hatramin'ny 45,000 tongotra.
Halavan'ny piaramanidina dia napetraka ny fepetra izay mamaritra ny elanelana takiana ho fiaramanidina mba hanala amin'ny hafainganam-pandeha sy feno ho lany fijanonana amin'ny fipetrahana. Ny fipetrahana lavitra ny ACJ320neo dia refesina amin'ny 4,665 tongotra, izay midika fa ny takiana saha ilaina halavan'ny-tanety ny fiaramanidina amin'ny eo ho eo ny lanjany. Ny halavan'ny saha voalanjalanja dia refesina amin'ny 5,820 tongotra, dia ny elanelana takiana mba handefa ny fiaramanidina ao amin'ny fiaramanidina haingana ary avy eo dia mijanona ho lany. Raha misy lafin-javatra maro izay mety hisy fiantraikany eo ireo olo-malaza halavan'ny piaramanidina, dia azo soa aman-tsara fa mitaky ny ACJ320neo kokoa halavan'ny piaramanidina mba hanala sy ny tany soa aman-tsara.
Ny Airbus ACJ320neo manana Sambo feno endri-javatra vaovao, mandray soa avy teknolojia fanatsarana nitombo ny taona maro ny fiaramanidina traikefa. The ACJ320neo, ary koa ny hafa fiaramanidina modely ara-barotra tafiditra ao amin'ny fandaharana Neo, lalitra tonga fitsipika amin'ny alalan'ny tariby fanaraha-maso, mandroso avionics, sy ny endri-javatra isan-karazany-boosting. Izany koa dia tonga noho ny 90-tongotra efitra izay azo namboarina araka ny tompony ny zavatra ilaina sy ny tiany. Raha ny toerana misy anao 19-seza fanahafana dia sady comfy sy mirentirenty, Airbus manana alinalina ny safidy izay hanampy ampanjifaina fiaramanidina araka ny tompony tiantsika manokana.
Ny Airbus ACJ320neo Aviation, raha mbola lavitra tsy ho tonga lafatra fiaramanidina, maneho ny hoavin'ny ara-barotra fiaramanidina. Miaraka amin'ny fanatsarana lehibe sady niteti sisin'ny famolavolana, dia mamonjy fampisehoana sy ny fahombiazan'ny olo-malaza izay mahatonga azy miavaka ny amin'ny sisa. Izany haingana, mahomby kokoa ny solika, sy ny maro hafa afaka mitondra entana mavesatra kokoa noho ny mpiara-belona taminy. Ireo dikany fanatsarana tanteraka tsy ho an'ny tompon'ny fiaramanidina manokana, fa koa ho an'ireo liana amin'ny Rentals. Same lafo vidy, tsara kokoa fampisehoana, dia ambany ny vola lany: inona intsony no ho renter ilainao ao amin'ny iray fiaramanidina manokana Rental? Airbus no nanao izany indray.
Airbus acj320neo hira fiderana anatiny
No Comments anefa.
Ny fanehoan-kevitra *